DDoS Attack - Manazava ny fomba hiarovana ny serveranao ny Semalt Expert
Lasa olana lehibe ho an'ny webmasters ny fiarovana ny tranokala tato ho ato. Izany dia tokonyho an'ny loza mitatao ho an'ny fanafihana fanafihana ataon'ny mpanao heloka bevava cyber. Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny webmaster rehetra dia ny "Distributed Denial-of-Service"(DDoS).
Mpitantana Success Successor Semalt, Andrew Dyhan, dia manome fahatakarana ny maha-zava-doza ny fanafihana DDoS mba hanampiana anao hanakana ireo mpihoko tsy hamela ny lohamilina iray.
DDoS dia endrika iraisan'ny fanafihana ataon'ny webmasters. Amin'ny ankapobeny, ny fanafihanadia mikendry ny hampihenana ny tranokalanao, saingy mitondra ny mety hisian'ny fanakanana ny tranonkalanao ary tsy mety ho an'ny mpitsidika - skill games no deposit bonus.
Raha misy tranganà fanafihana DDoS mifanohitra amin'ny fampiharana Internet, dia mahazo ny rindrambaikomavesatra ny hackers. Vokatr'izany dia tsy afaka manompo araka ny tokony ho izy ny pejy Internet.
Mba hanosehana server iray mitarika fampiharana hianjady, dia manaparitaka izao manaraka izao ny fanafihana DDoS:
Espace disk space
Fahatsiarovana ny server
Fampiharana fandrakofam-pahaizana manokana
Daty fisakafoanana Database
Ny fanafihan'ny DDoS amin'ny fampiasana tranonkala dia:
1. Ny fametrahana ny fifandraisana amin'ny rindrambaiko amin'ny fampiharana amin'ny alalan'ny famoronana fanontaniana goavana amin'ny CPU.
2. Fanimbana ny fanompoana amin'ny olona na rafitra, anisan'izany ny fanakanana mpampiasa irayny fidirana amin'ny tranonkala amin'ny fanandraman'ny fidirana an-tserasera izay mahatonga ny fampiatoana ny kaonty.
3. Fandefasana tranonkala amin'ny tondradrano amin'ny ezaka hanakanana ny fifamoivoizana tsy ara-dalàna amin'ny fidirana amin'ny tranokala.
Ny fanafihana DDoS dia nanjary fomba fiasan'ny safidy ho an'ny hackers satria efa saika efaTsy azo atao ny miaro tena, mora ampiasaina ary manimba ny mpampiasa maro. Ny ankamaroan'ny fotoana, ny mahantra rehetra mila hacker dia ampy ny harenaary lasibatra vulnable iray mba haka tranonkala tsy misy aterineto.
Ahoana no ataon'ireo fanafihana ireo?
Ny fanafihan'ny DDoS dia manomboka amin'ny hackers iray na hackers maromaro mamorona andianabot system. Ny hacker dia mandefa botsa tsirairay mba hitondra fiara mankany amin'ny tranonkala iray manokana sy amin'ny fotoana tsy voafetrafanerena amin'ny mpizara tranokala.
Raha manana tamba-jotra lehibe ny rafitra bot, dia mety hitondra nytoerana. Na dia tsy voatery hampiharihary ny mombamomba azy manokana aza ireo fanafihana ireo raha ampitahaina amin'ireo teknolojia hacking hafa, dia mbola ratsy ihany izy ireofiantraikany amin'ny orinasa miankina amin'ny famakiam-boky sy ny fivarotana an-tserasera. Ny fanafihan'i DDoS dia afaka mandany orinasa mihoatra ny $ 500,000.
Ireo fanafihana ireo dia mety hanimba ny lazan'ny marika sy fanomezanany fahatsapana diso amin'ny mpampiasa. Rehefa vita ny mpifaninana, dia manome baiko ny mpifaninana aminao izy ireo amin'ny famelana azy ireo hametraka orinasa matanjaka kokoa,marika orinasa marim-pototra raha oharina amin'ny marika izay toa tsy azo antoka. Amin'ny tranga sasany dia manohintohina ireo webmasters hanohizana ireo mpanao heloka bevava cyberny fanelingelenana ny serivisy mandra-pandraisany vola be.
Ankoatra izany, ny angona nalaina tamin'ny fanafihana DDoS dia azo ampiasaina amin'ny hackers hanafikany vohikala amin'ny hoavy. Amin'ny ankapobeny, ny fanafihana manenjika dia mpanararaotra fotsiny ary mitranga rehefa fantatry ny mpihoko fa malemy be ny tranonkalaizay mahatonga azy ho lasibatra mora ho an'ny fanafihana sarotra amin'ny ho avy.
Na dia sarotra aza ny fanafihana ny DDoS, dia azo ampiasaina amin'ny SiteLock izy ireorafitra fiarovana. Ny vahaolana hita ao amin'ny rafitra fiarovana ao amin'ny SiteLock dia afaka mamantatra sy mitazona ny fifamoivoizana tsy ilaina avy amin'nybotsaka amin'ny fidirana amin'ny tranokalanao nefa tsy manelingelina ny fifamoivoizana tsotra.
Ny rafitra fiarovana ao amin'ny SiteLock dia miaro ny fandraharahana avy amin'ny karazana zava-dratsy isan-karazanyfanafihana toy ny karazana fanafihana DDoS amin'ny fampiasana ny tranonkala fiarovana, DNS sy ny fiarovana ny fotodrafitrasa izay tena izylafiny manan-danja amin'ny fiarovana DDoS.